Xukunno la adkeeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xukunno la adkeeyey
Publicerat torsdag 28 januari 2010 kl 14.35
Dawladda Iswiidhen ayaa maanta shaacisay ciqaabo ka adag sidii hore in lagu qaado qaar ka mid ah falalka dembiyada lagu dhaqaaqo. Iyadoona ay dawladdu soo jeedisey in lagu daro xukun aad u adag ee jirdilka.
Dembiyada noocaasiya ayaa maanta ey maxkamaduhu u furan yihiin iney ku ridaan ugu badnaan inta u dhaxeeysa sannad ilaa iyo toban sannadood, hase yeeshee intooda badan ey xukummadaasi noqdaan ugu badnaan sannad iyo bar, sida ku cad baaritaan ey idaacadda Iswiidhen laanteeda wararka ee Ekot soo xigatay. Amuurtaa ayey haddaba dawladdu qabtaa soona bandhigtay qorsheheeda la xiriira in dembiyada noocaasiya sidaa laga adkeeyo, iyadoona ay sheegtay dawladdu in kor loo qaado lana gaarsiiyo ugu yaraan afar sannadood. Waa kuwee haddaba dembiyada la hadalhayo, waxeyna wasiiradda garsoorku Beatrice Ask ku jawaabtay:
- Dembiyada foosha xun. Kolka jirdil loo geeysto qof aan iska kaa difaaci karin sida qof jirkiisu dhiman yahey, qof waayeel ah oo kale. Waxaan ula jeedaa dembiyada jirdilka ee foosha xun.
Sidoo kale waxa ay dawladdu soo jeedisey in la adkeeyo xukunka la xiriira dembiyada baadda adag. Iyadoona ay dawladdu shaacisay in la gaarsiiyo ugu yaraan hal sano, halka uu iminka ka yahey lix bilood oo xarig ah. Iyo sidoo kale in heyadaha garsoorka loo suurtageliyo in xukun sidii hore ka adag lagu ridi karo mar haddii ay cadaato in dembiga baadda ee la galay uu ahaa mid la soo abaabulay. Amuurtaa ayey Petrice Ask ku macneeysay sedan:
- Waa in loo fahmaa ciqaabta dembiyada la galo ay yihiin kuwo caqligal ah kuna haboon. Qofka dembiga galayna waa in cawaaqibtiisa la mariyaa. Waxeyna middaa ku xiran tahay sida ey bulshadu u garansan tahey culeeyska dembiga.
Dalkan Iswiidhen ayaa meel hoose kaga jira tirada maxaabiista ee bulshada boqolkiiba, marka loo barbar dhigo waddammada horumarey, sida uu noo sheegay Jerzy Sarnecki, ahna caalin ku takhasusay culuunta dembiyada kana hoowlgala jaamicadda Istockholm. Sarnecki ayaa qaba in muhiimadda ey dawladdu middan ka leedahey tahay oo keliya sidii loo qancin lahaa bulshada maadaama lagu jiro sannad looltan doorasho. Waxaase uu caalinku shaki weeyn geliyey sida uu sheegey in ay wax ka dhimi doonta tirada dembiyada dalka ka dhacda.
- Su’aahu waxaa ay tahey, ma lagu gaari karaa natiijo go’aanka noocaniya in lagu dhimo dembiyada dalka ka dhaca. Waa mid shaki weeyn ku jiro in natiijo noocaasiya lagu gaaro, sida cilmi baarista lagu ogaadey. Sidaa waxaa yiri Jerzy Sarnecki, ahna caalin ka hoowlgala jaamicadda Istockholm.